Achawlaymyar, Author at Achawlaymyar - Page2of 488
ရှားပါးစာရင်းဝင် ချစ်သူလက္ခဏာ (၅) မျိုး ဒီလိုလူမျိုးတွေ့ရင် လုံး၀ လက်လွတ်မခံပါနဲ့ အချစ်စစ် ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါး လာတာနဲ့ အမျှ သင့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ချစ်တဲ့သူ၊ ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲချစ်တဲ့သူ၊ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တဲ့သူဆိုတာ တကယ်ကို ရှားပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ တကယ်လို့ ခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ချစ်သူ မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာအရမ်းကို ကံကောင်းတာကြောင့် လက်လွှတ်မခံပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေနော်… (၁) သင့်ဆီက ဘာမှမမက်မောဘူး ဒီလို မိန်းကလေး မျိုးဟာ သင့်ရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေ၊ ကျောထောက်နောက်ခံတွေ၊ သင့်ရဲ့ဂုဏ်တွေ၊ ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကို စိတ္မဝင္စားတဲ့သူပါ …။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သင့်ကိုသင်လို့ပဲ မြင်ပြီး သင်ဆင်းရဲသည် ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည် … Read more
ခင္ဗ်ားတို႔မို႔လုပ္ရက္ေလတယ္) ဆရာ ကြၽန္ေတာ့္သားေလး စာသင္ခ်င္လို႔ကြၽန္မသမီးေလး စာသင္ခ်င္လို႔ပိုက္ဆံကေတာ့ေလာေလာဆယ္မရိွေသးဘူးဆရာ၊ အ့တာ ဆရာ့ေဘာ္ဒါမွာလာထားလို႔ရမလားလို႔၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြက မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ေျပာရင္ ကေလးကဘယ္မွာလဲ၊ ခုကြၽန္႔ေတာ့္ေဘာ္ဒါကိုလာပို႔လွည့္လို႔ေျပာတဲ့လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းေရေတြႀကီးဒုကၡေတြေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ခုႏွစ္အခ်ိန္မွာလည္း၊ သူတတ္စြမ္းသမ်ွခ်ိတ္ဆက္ကူညီေပးခဲ့သူ၊ ဧရာဝတီျမစ္ေဘးကရြာတစ္ခ်ိဳ႕ကမ္းပါးၿပိဳၿပီးတစ္ရြာလံုးျမစ္ထဲေရာက္လုဆဲဆဲ၊ ေျမျပင္ေပၚအခ်ိန္မီကယ္တင္ေပးခဲ့သူ၊ တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာမီ.းေဘးၾကံဳရတုန္းကလည္းကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကူညီခဲ့ဖူးသူ၊ Covid ေရာဂါျဖစ္ေတာ့စိုက္သိပၸံမွာQဝင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္အစားအေသာက္ တစ္ခ်ိဳ႕သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့သူ၊ သူ႔ရဲ႕ေဒသေလးမွာ၊ က်န္းမာေရးအခမဲ့အသင္းေလးတည္ေထာင္ပီးပို႔ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့သူ၊ စာၾကည့္တိုက္ေတြလုပ္ၾကျပန္ေတာ့လည္း၊ လက္လွမ္းမီသမ်ွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပီး၊ အသစ္စ.က္စ.က္စာၾကည့္တိုက္ႀကီး ​ေပၚေပါက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္းပါဝင္ခဲ့သူ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကိုလည္း ဦးေဆာင္ရာမွာသူပဲေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူသင္ၾကားျပသေပးခဲ့ဖူးတဲ့တပည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆင္းအစရိွသျဖင့္နယ္ပယ္အသီးသီးကိုေရာက္ရိွေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးခဲ့သူ၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း၊ ထူးခြၽန္ပီးခ်ို့တဲ့ေသာေက်ာင္းသားေလးေတြအတြက္အမွတ္မွီရာစိတ္ပါဝင္စားရာေက်ာင္းအသီးသီးကိုတက္ေရာက္ေစဖုိ႔အလႉ႐ွင္မ်ားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူအေဆာင္မွာဆိုလည္းတပည့္ေတြနဲ႔ၾက.မ္းတစ္ေျပးတည္း အိ.ပ္စက္ခဲ့သူ၊ စာသင္ရင္အားမာန္အျပည့္နဲ႔တပည့္တိုင္းကိုရိွသမ်ွပညာအကု.န္သင္ေပးသူ၊ ႏိုင္ငံအေရးမွာလည္းမတရားေနတဲ့အရာေတြကိုမခံမရပ္ႏိုင္၍ ေ႐ွ႕ကေနမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခဲ့သူ၊ အာဏာ႐ူးေၾကာင့္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းအသ က္ေပးခဲ့ၾကတဲ့သူရဲေကာင္းေတြသတင္းၾကားရခ်ိန္တိုင္းေသြးမေတာ္သားမစပ္ေပမယ့္၊ ေယာက္်ားတန္မဲ့က်ဳပ္ေ႐ွ႕မွာမ်က္ရည္ေတြေတြႀကီးက်ေနတတ္သူႀကီး၊ ေရးရင္ကုန္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေသ ဆရာတစ္ေယာက္ပါ၊ သူကူညီေပးခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေလးေတြဆီကတစ္လတစ္ခါ ဖုန္းေလးမ်ားဆက္ေလမလားဆိုပီးေမ်ွာ္ေနခဲ့သူပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြေနႏိုင္လြန္းတယ္မဆက္ၾကဘူး။ အိမ္ပ.စ္၊ ဇနီးမယားပ စ္၊ သားသမီးပ စ္၊ … Read more
အရမ်းချစ်ကြပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးမရင့်ကျက်တဲ့ စုံတွဲတွေမှာရှိတဲ့ အချက်( ၅ ) ချက်
ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာ နှစ်ဖက်လုံးရင့်ကျက်တဲ့ စုံတွဲဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် စုံတွဲတွေမှာပေါ့။ တစ်ခါတလေ တခြားသူရဲ့အမြင်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တကယ်များမချစ်လို့လားဆိုပြီး သံသယတောင်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းတော့ ချစ်ကြပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးက မရင့်ကျက်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ (၁) ရန်ဖြစ်ရင် အလျှော့မပေးချင်ဘူး နှစ်ဖက်လုံးမရင့်ကျက်တဲ့ စုံတွဲတွေဆိုတာ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ လုံးဝအလျှော့မပေးချင်ကြပါဘူး။ စကားလုံး သေးသေးလေး တစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်၊ အမူအယာနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် လုံးဝကို အတင်စီး မခံချင်ကြပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနိုင်ရဖို့အရေး စကားနာထိုးပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နာကျင်စေကြပါတယ်။ ဒါကတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မချစ်လို့ မဟုတ်ပဲ မရင့်ကျက်ကြသေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်လေးတွေကို မပြင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲရတတ်တာကြောင့် ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ (၂) စမတောင်းပန်ချင်ဘူး ဒီလိုစုံတွဲတွေ … Read more
မြောက်ဥက္ကလာ၊ဝေပုလ္လ၊ Denko ဆီဆိုင်ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှူနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အမျိုးသား၁ယောက် အမျိုးသမီး ၂ယောက် ထိခိုက်ခဲ့ရာမှာ အောက်ပိုင်းပြင်းထန်းဒဏ်ရာရသွားတဲ့ အမျိုးသားမှာ သေဆုံးသွားပြီးတော့ သူ့အမျိုးသမီးက ကိုယ်ဝန် ၅ လနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Ko Kyaw ——————- ေျမာက္ဥကၠလာ၊ေဝပုလႅ၊ Denko ဆီဆိုင္ေ႐ွ႕မွာျဖစ္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႉေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အမ်ိဳးသား၁ေယာက္ အမ်ိဳးသမီး ၂ေယာက္ ထိခိုက္ခဲ့ရာမွာ ေအာက္ပိုင္းျပင္းထန္းဒဏ္ရာရသြားတဲ့ အမ်ိဳးသားမွာ ေသဆံုးသြားၿပီးေတာ့ သူ႔အမ်ိဳးသမီးက ကိုယ္ဝန္ ၅ လနဲ႔က်န္ရစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Ko Kyaw &;
တစ်ရက်ငှက်ပျောသီး ၂လုံး ၁လစားပြီးနောက် အံ့သြ သွားမည့် အပြောင်းအလဲ
တစ်ရက်ငှက်ပျောသီး ၂လုံး ၁လစားပြီးနောက် အံ့သြ သွားမည့် အပြောင်းအလဲ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ– တစ်လောကလုံးက လူသားများအားလုံးက သစ်သီးစားသုံးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာ လက်ခံထားကြပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အဝလွန်ရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက် ရောဂါအဖြစ်များတဲ့ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အများဆုံးစားသုံးတဲ့အသီးဟာ ဘာအသီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး နှင့် ဖရဲသီးများလား။ မဟုတ်ပါဘူး ဒီအသီးတွေ ထဲကတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲ ငှက်ပျောသီးဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးကတော့ ကျွန်ပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှ ရောဂါအားလုံးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တာ တော့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကို ငှက်ပျောသီး ၂လုံးစားသုံးခြင်းဟာ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကို အတန်အ သင့် ကာကွယ်တားဆီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်များ က သက်သေထူနေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးဟာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးသောအသီးဖြစ်ရုံသာမကကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုပါမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အသီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး အတွင်းမှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းများ စုံလင်စွာပါဝင်နေရုံသာမက … Read more
တစ်နေ့တွင် တောမှ စပါးဝယ်သူများရောက်လာ၍ မိခင်က “ကဲ… မင်းတို့ လိုချင်ရင်လည်း ယူသွားကြတာပေါ့။ ငါဝယ်တုန်းက (၆၀) စျေး ဝယ်ထားတာပဲ။ မင်းတို့လိုချင် (၅၀) စျေးထားပေါ့” ဟုပြောဆိုနေခိုက် အိမ်လှေကားနားတွင် ကစားနေသော အောင်ဆန်းလေးက မျက်စောင်းထိုး၍ “အစ်မ…ခင်ဗျား မဟုတ်တာတွေ ပြောရော့မယ်။ ဒီစပါး (၅၀) စျေးနဲ့ ဝယ်ယူထားတာဗျ။ ကျုပ်သိတယ်။ ဟုတ်တာပြောမှ ဥစ္စာပေါတယ်။ လိမ်ပြောတာ မကောင်းဘူး” ဟု ဝင်ရောက်ပြောလိုက် သဖြင့် အနီးရှိ လူများမှာ အံ့ဩရယ်မော ကြလေသည်။ ဧည့်သည်များ ပြန်သွားသောအခါ မိခင်က အနားခေါ်ပြီး ပေါင်တွင်းကြောကို လက်နှင့်လိမ်ဆွဲကာ “ဧည့်သည်တွေနဲ့ စကားပြောနေတုန်း.. လူကြီးတွေ ပြောနေတဲ့အထဲ မင်းဘာလို့ ဝင်ပြောရတာလဲ၊ နောက်မပြောနဲ့” ဟု ဆုံးမရာ “အစ်မ … Read more
တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားများ တပ်မက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ
တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားများ တပ်မက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ ဆေးပညာ အမြင်အရ တင်ပါး ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တခြား အမျိုးသမီးတွေထက် ဉာဏ်ရည်ထက် မြတ်ပြီး၊ သားကောင်းမိခင် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ဒါ့အပြင် ယောက်ျားတွေကို စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ရာ မှာလည်း တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုသာ ပိုမို တပ်မက် ကြတယ်လို့ အဖြေထွက် ခဲ့ပါတယ် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ တင်ပါး ကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပုရိသတွေ ဘာကြောင့် တပ်မက်ရ သလဲ ဆိုတာရဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် ။ ( … Read more
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်…
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်… လူတစ်ယောက်စိတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲလို့ သင်တွေးမိနေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို မျက်လုံးတွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ သတိမထားမိလို့သာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာပါ …။ အပြုအမူ၊ အမူရာတွေအကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့ သြစတေးလျ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Alan Pease က လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို သူ့ရဲ့အမူရာတွေကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ၁. မျက်လုံးမှိတ်ထားရင် လူတစ်ယောက်က မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စကားပြောနေမယ်ဆိုရင် သူက တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားချင်လို့ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ သင့်ကိုကြောက်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ သင့်ကို အနားမှမရှိစေချင်တာပါ။ သင့်အနားမှာရှိနေရင် သင့်အတွက်စိတ်ပင်ပန်း စေတယ်။ သူ့မျက်လုံးကို မှိတ်ထားတဲ့အခါ သင့်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးလေ …။ ၂. ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ကွယ်ထားရင် … Read more